Ivan Perisic Ingane Yendaba Nengabe Untold Biography Imininingwane nge-LifeBogger
Ikhaya STARS E-EUROPE Ivan Perisic Intsha Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba ephelele yeBhola Genius eyaziwa kakhulu ngesidlaliso; "UHen". Indaba yethu ye-Ivan Perisic yobuntwana kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sokunganeka kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, isizinda somndeni, ukuphila komshado, kanye nezinye izinto eziningi ezingekho (okungaziwa) ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi mayelana nokubonisa kwakhe okumangalisayo njengewindi noma umdlali wesibili. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abathinta i-Bio ye-Ivan Perisic ekhangayo kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
Ivan Perisic Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Isiqalo sokuphila
U-Ivan Perisic wazalelwa ku-2nd ngoFebruwari, u-1989 kunina, uTihana Perišić nobaba u-Ante Perisic Split, Croatia.
U-Ivan Perisic uvela emlandweni womndeni wokulima. Ngabanye nabazali bakhe, u-Ivan wakhulela nodadewabo oyedwa kuphela, u-Anita Perisic. Emuva ngalesosikhathi ngesikhathi esengumntwana, abangane bakhe babevame ukumbiza I-Koka okusho ngokwezwi nezwi "hen" ngolimi lwakhe. I "UHen"Isidlaliso safika saba ngenxa yokuthi u-Ivan osemncane wayelokhu ebonakala esiza ubaba hen inkukhu epulazini ngaphandle komuzi wakubo ka-Omis ogwini lwaseCroatia.
Ukukhuphula izinkukhu kwakuyibhizinisi elikhulu ku-Ante (ubaba ka-Ivan) nomndeni wakhe. Naphezu kokubizwa ngokuthi yisidlaliso "UHen", U-Ivan akazange akhathazeke kakhulu njengoba ayeziqhenya ngebhizinisi likayise.
Ivan Perisic Ingane Yendaba Indaba Engenakubhala Biography Facts- Uthando Lamazinyo Nomhlatshelo
Ngaphandle kokusiza abazali bakhe epulazini lezinkukhu, u-Ivan osemncane wathola ithalenta ebhola. Wasebenzisa isikhathi sakhe sokudlala ukudlala ibhola kanye nesifiso sakhe somdlalo wabona ukuthi ubhalisa neqembu lendawo, I-Hajduk Split ngubani owamnikeza isiteji ukukhombisa ithalenta lakhe.
Ukufuna kuka-Ivan ukuthatha umsebenzi wakhe omkhulu futhi kuya ezingeni elilandelayo beza nenkinga yezezimali emndenini wasePerisic. Abazali bakhe babengenakukwazi ukukhokhela izimali zakhe zemfundo. Isidingo semali safika imihlatshelo emikhulu ngoba ubaba wakhe owadinga ukuthengisa izinkukhu zakhe epulazini izinkukhu ukuze anakekele izidingo zomntanakhe.
Uyise ka-Ivan, u-Ante Perisic uyindoda ekholelwa ekutshalweni kwengane yakhe ngisho noma kusho ukuyeka yonke impahla enayo. U-Ante wathengisa imishini yakhe yenkukhu ngenhloso yokwenza imali ukuze athumele indodana yakhe esikoleni esingcono kakhulu se-football eCroatia.
Ngenhloso yokwenza umndeni wakhe uphumelele, u-Ante kwakudingeka athenge imishini yezolimo esikhwameni okwathi kamuva wamthola enkingeni (Ichazwe ngezansi ku-Ivan Perisic Facts Family). U-Antie Perisic wayekhona endodaneni yakhe kuzo zonke izinyathelo zendlela.
Ivan Perisic Ingane Yendaba Indaba Engenakubhala Biography Facts- Umhlatshelo Wokugcina Nokuphakama Ekudumeni
Noma kunjalo, kwakuyibhizinisi lezinkukhu lomndeni elibeka izifundo ze-Ivan emsebenzini ekuqaleni. U-Ivan wasebenzisa iminyaka eyisithupha eqinile eHajduk, edlala ibhola lakhe futhi eya esikoleni. Naphezu kokuhlukunyezwa nokuthengwa kwempahla yenkukhu, ubaba ka-Ivan wabonisana nokuthatha enye imali. Lesi sikhathi, imali yokuboleka imali isetshenziselwa ukuthumela indodana yakhe eFrance ukuze uthole amathuba amakhulu emsebenzini wakhe. Njengalesi sikhathi, u-Ivan wabizelwa ukuhlolwa kukaSochaux, iqembu laseFrance elisekwa uJean-Pierre Peugeot, ilungu elivelele lomndeni wakwaPeugeot.
Ku-Ivan osemncane, inhloso eyinhloko yokuya eFrance ngaphandle kokuthola ithuba emsebenzini wakhe kwakuwukuhlala ezimele futhi akhulise imali yokubuyisela izikweletu ezinkulu zikayise.
Ngaphandle kokungabaza, eziningi zalezi zimali zaqhutshelwa ekuhambeni kwakhe Sochaux. Lokhu kuthutha kwenzeka ngesikhathi se-2006 / 2007. Ngenhlanhla, u-Ivan waphuthuma ngokushesha nje lapho edlala umdlalo wakhe wokuqala weqembu. Kulohlobo, ngo-2006, amaphephandaba aseFrance aqala ukubhala mayelana a intombazane enezinwele ezimhlophe okufanekisiwe ngezansi ngubani owayethanda ukuhlaba umxhwele isixuku.
Ukuzijabulisa kuka-Ivan kwaholela ekuthutheleleni eBelgium lapho ekholelwa khona ukuthi uzokhula ngokushesha. U-Ivan waqala ngemboleko eRoeselare ngaphambi kokuthuthela eClub Brugge lapho ekugcineni ezenzela khona igama. Ngenkampani yaseBelgium, u-Ivan waba yiBelgium Pro League nomqeqeshi weBelgian Best Footballer we-2011.
Lo mdlalo wamenza wahamba Borussia Dortmund lapho athola i-2011-12 Bundesliga. Ngalesi sikhathi, wayengasaziwa ngokuthi nguJehova umfana onoboya obomvu, kodwa i-footballer ekhulile futhi ebulalayo emaphikweni naphambi komgomo. Uhambo lwakhe oluya eVfL Wolfsburg nase-Inter Milan belandela ngemuva kwalokho, njengoba bekungathi, manje umlando.
Ivan Perisic Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
Kuzo zonke izinqola zeCroatia eziphumelelayo, kukhona intombazane enhle kakhulu, intombi nomfazi. U-Ivan Perisic wahlangana nobumnandi bakhe obuncane, uJoospa esikoleni esiphakeme. Emuva ngaleso sikhathi, bobabili abathandi babefunda nabo ekilasini elifanayo.
Bobabili baqala ubudlelwane babo njengabangane abakhulu futhi kamuva bahlanganyela. U-Ivan noJosipa bashada ngo-2012 ngesikhathi sakhe noBorussia Dortmund. Baye baba imibhangqwana ejabulisayo kusukela emshadweni wabo.
Ngokubili, bobabili imibhangqwana inendodakazi okuthiwa uManuel kanye nendodana, uLeonard oneminyaka emithathu ubudala kunodadewabo. ULeonardo Perisic wazalelwa eWolfsburg futhi kuthiwa unesibopho esiqinile kakhulu nobaba wakhe okholelwa ukuthi indodana yakhe izoba yinto efana naye. Ngalesi sikhathi, ngaphandle kwemibhikisho yezezimali enjengoba ehlangene nomndeni wakhe.
U-Ivan Perisic uzinikele ngokuphelele emndenini wakhe. Wena akathandi ukukhangisa okuningi, u-Ivan wabe esethatha isithombe nomndeni wakhe phambi kwe-panorama enhle yaseLig Lugano eSwitzerland.
Ivan Perisic Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Imininingwane yomndeni
Imali i-Ivan Perisic eyenziwa ebhola ibhola yayiwusizo emndenini wakhe. Wayekhathalela unina, udadewabo futhi wahlawula izikweletu zikayise emshinini wezolimo owazithenga ngemboleko ukuze ahlale nomndeni wakhe.
Njengomthombo owodwa, umshini wezolimo u-Antie uthenge ngemalimboleko awuzange ukhokhwe ngesikhathi futhi lokhu kwaholela empini yemithetho eyayinomndeni wakwaPerisi. Ukwesaba kwabo ekugcineni kwaphela njengoba u-Ivan ekhokhela zonke izinkokhelo.
Ivan Perisic Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Imininingwane Yomsebenzi
U-Ivan Perisic waphinde wawela naye UJurgen Klopp eDortmund ngenxa yokungabi nesikhathi sokudlala. I-Klopp okufanekiselwa ngezansi njalo kugcinwe yisimungulu emicimbini kaPerisic futhi kwaze kwaba yilapho ethi "ingane"Ngenxa yokuziphatha kwakhe. Ngokufanelekile, u-Ivan Perisic akafuni ukuhlala ebhentshini. Lapho ebuzwa ngalokhu, wathi: ...
"Lapho ngihlezi ebhentshini, ngiyafa," Ukungadlali umdlalo uzizwa njengesijeziso kimi. Kwadingeka ngifunde ukuthi ngingaba kanjani ochwepheshe ngalokhu ngendlela enzima. Kumelwe ngivuthiwe ngokwengqondo "
U-Ivan Perisic akayena umngane wabakhokhi bakaJuventus. Lapho ethukuthele, ubamba umphikisi wakhe entanyeni nasemhlathini njengoba kubonakele UJuan Cuadrado futhi Alvaro Morata.
QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu ye-Ivan Perisic yokuBantwana kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona okuthile okungabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi !.
I-Croatian Football Diary